Drjalaaludiin oo ka hadlay cirbado maandoriyaal ah oo dhalinyarada isku duraan – Bandhiga
W/Q DrJalaaludiin Yuusuf Ahmed.
Magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya dhalinyaro aad u da’ yar oo ah iftiinkii Nolosha mustaqbalkii bulshada oo aad u isticmaala maandooriyayaal Cirbadaha Tramadol iyo pethidine Injection oo la qabsaday , Waxaase sii naxdin badan in gabdhihiina maciin bideen cirbadahaas sunta ah oo isbitaalada la keeno maalin walba iyagoo addicted ku ah xanuuno kalana ka soo gaareen.
Waxa walaaca sii kordhinaya waa in arinkaas ay ku bateen dhalinya aqoonta leheed, ardaydii jaamacadaha , dhalinyaro hada jaamacada dhameeyay , dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal mustaqbalka dalkaan ahaa oo caadaystay isticmaalka xanuunka leh ee cirbadahaas iyo dawooyin kale oo qatar ah ku caafimaadkooda , dhaqanka iyo badqabkooda guud.
Isticmaalka maandooriyahaan iyo dawooyinkaas kaliya qatar kuma ahan dadka isticmaala oo qura balse waxaa ka dhalan karta aafo bulsho , cudurro faafo iyo dhaqan rogan musiibo ah.
Wasaarada caafimaadka muddo ayay ku mashquulsaneed sidii loo kontrooli lahaa daawooyinkaas loo xadidi lahaa isticmaalka daawooyinkaas inkastoo sharcigii xakameen lahaa uusan barlamaanka anisixin hadana waxaan ogahay inaan dadaal looreeban xakamenta iyo wacyigalinta la xiriirta daawooyinkaan musiibada ku ah dhalinyarada !
Waxaase loo baahan yahay wacyi galin bulsho oo xoog leh oo ka bilaabata goobaha wax barashada , jaamacadaha iyo masaajiida , waxaa muhiim ah in waalidiinta ku baraarugaan musiibadaan qaybna ka noqdaan badbaada dhalinyaradaas hogga ku dhacayso maalin walbana wiil ama gabar mustaqbal ifaya leh oo pethidine iyo taramadole dilooday !
Waxaa mihiim ah ganacastada ka ganacasanayo mustaqbal beelka iyo khasaarada dhalintaas in ay ka waantoobaan oo ay joojiyaana ka ganacsiga dilka ah ee ku le’anayaan dhalinyaradeena !
Fadlan faafi fariintaan oo bulshada gaarsii !